Adobe indesign 2020 - FRANTSAY Interface
Posted in Darknet, angona fanodinana, Website
Lahatsoratra nohavaozina 25 Novambra 2020 ny 3 H 04 ahy
Download Adobe InDesign 2020 mialoha mampandeha
InDesign 2020 manohana endrika SVG, SVGZ et SMIL (fanentanana SVG teratany) ary hanome ny vokatra ho atiny vector rehefa manondrana any. PDF, HTML, EPUB na Publish Online. koa, sary SVG azo jerena ao amin'ny tontonana Interactivity Preview ny sarimiaina EPUB D'InDesign.
Inona no vaovao ao InDesign
Nandritra ny taona lasa, Teknolojia ho an'ny famoahana dia ampahany amin'ny programa zahana amin'ny fizahana fizahana vaovao an'ny'InDesign. Maro ny endri-javatra nampidirina tao amin'ny lisitry ny firarianay!
Ity misy lisitry ny azonao antenaina avy amin'ny Adobe. InDesign 2020. (Voamarikao ny fiovan'ny anarana? Ny "CC" dia voafafa.)
Fitsipika amin'ny tsanganana
Ny fitsipiky ny tsanganana dia azo ampiana ho azy eo anelanelan'ny tsanganana ao anaty zoro lahatsoratra misy tsanganana maro. Ny fitsipiky ny tsanganana dia azo alaina avy amin'ny fiakaran'ny tsipika ambony amin'ny lahatsoratra mankany amin'ny fidinan'ny tsipika ambany. Raha misy banga lahatsoratra misy Insert Column Rules azo alefa, ny fitsipika dia ampiharina avy eo ambony inset ka hatrany amin'ny sisiny ambany amin'ny endritsoratra. Raha vantany vao misy litera iray na maromaro ao amin'ny andian-tsoratra, ny fitsipi-dàlana dia ampiharina manomboka amin'ny fiakarana amin'ny laharana ambony mankany amin'ny fidinan'ny andalana ambany amin'ny lahatsoratra ao anaty frame, toy ny fehintsoratra. Hanampy fitsipi-tsanganana, safidio ny fiasa ao amin'ny boaty fifanakalozan-kevitra Text Block options (Object> Safidy fanakanana lahatsoratra) na ao amin'ny boaty fifanakalozan-kevitra Object Style
Mitadiava sary mitovy amin'izany
Ho fanampin'ireo fampiasa hita ao amin'ny tontonana CC Library, ny mpampiasa izao dia afaka mahita loharanom-pahalalana sary mitovy amin'izany mivantana avy amin'ny sary apetraka ao amin'ny filaharany InDesign. Mba hahitana loharano mitovy amin'izany, ny mpampiasa iray dia afaka manindry bokotra havanana amin'ny loharano sary ao amin'ilay rakitra InDesign ary mifidiana Mitadiava Sary Mitovy, safidio ny loharanom-pahalalana sary ary safidio ny Hanova> Mitadiava Sary Mitovy, na safidio ny loharanom-pahalalana sary ary tsindrio ny bokotra Mitadiava sary mitovy amin'izany ao amin'ny tontonana fananana. InDesign hikaroka ao amin'ny Adobe Stock sy ny tontonana CC Library. Ny fikarohana dia azo atao manokana kokoa amin'ny alàlan'ny fanapahana ny ampahany amin'ilay clip loharano. Ny fananana mifanentana rehetra dia ho voatanisa ao amin'ny tontonana CC Library.
Fanatsarana ny fanamarinana ny tsipelina / Fanamarinana ny tsipelina miverina
Toy ny fifampiresahana Find / Modifier, ny mpampiasa izao dia manana safidy hanova ny làlan'ny fikarohany. Tsy mila miahiahy momba ny fandisoana teny tsy nahy intsony ny mpampiasa ary tsy maintsy mandalo ilay rakitra na tantara iray manontolo mba hahitana an'io teny io. Mitsitsy fotoana be izao, indrindra rehefa manamarina ny tsipelina antontan-taratasy misy lahatsoratra maro.
Miovaova ny polisy
InDesign izao dia manohana endri-tsoratra miovaova, endrika endri-tsoratra vaovao misokatra izay manohana ireo toetra manokana toa ny hateviny, ny sakany, fironana, habe optique, sns. mpampiasa iray hanovana toetra manokana.
Manendre hitsin-dàlana amin'ny fomba mampiasa kitendry tsy misy keypad isa
Amin'ny kinova taloha d'InDesign, ireo mpampiasa biraonao sy solosaina finday izay tsy manana fitendry miaraka amina keypad isa dia tsy afaka manome hitsin-dàlana ho an'ny style. Ny mpampiasa izao dia manana ny fahaizana hametraka saika ny hitsin-dàlana fitendry amin'ny fomba fitendry tsy misy keypad isa.
Amin'ny kinova taloha, hampiseho ny efijery an-trano, voatery nanidy ny antontan-taratasy misokatra rehetra ny mpampiasa. ankehitriny, misy bokotra an-trano vaovao izay hanokatra ny efijery an-trano isaky ny tianao. Ny kisary vaovao dia mamela ny mpampiasa hifindra avy amin'ny antontan-taratasy mankany amin'ny efijery Home amin'ny fipihana ny bokotra arrow na ilay kisary. InDesign.
koa, menus izay tao anatin'ny bara fisoratana anarana teo aloha (Safidy aseho sy ny maody efijery) nampiana amin'ny baraovana.
fikarohana Creative Cloud
Nohatsaraina ny asan'ny fikarohana eo an-tampon'ny efijery an-trano. Rehefa manoratra ianao, Ny fehezan-teny mikaroha soso-kevitra dia manomboka miseho ao anaty lisitra mitete, miaraka amin'ireo singa tadiavina teo aloha. Ny bara fikarohana dia aseho eo afovoan'ny efijery an-trano ary mampiseho ireo entana mifanaraka aminy ao amin'ny Help / Support, Tahirin'ny mpampiasa sy antontan-taratasy miasa.
Alaharo ny tontonana Links miaraka amin'ny safidy Scale
Ny isa ambaratonga ao amin'ny tontonana Links dia azo alamina ho isa. Amin'ny kinova taloha, ny mari-pahaizana dia nalahatra araka ny abidia, araka ny aseho etsy ambany.
Fanohanana ny maotera amin'ny fiteny Azia atsimo atsinanana
Masinina vaovao, Harfbuzz, dia ampiana ambanin'ny World-ready composer. Ity motera ity dia manatsara ny fandikana ny script ho an'ireo fiteny Azia atsimo atsinanana manaraka: Thai, birman, Khmer, lao et cinghalais.
Ny rakitra VG sy SVGZ dia azo ampidirina ao anaty antontan-taratasy InDesign ary InCopy. Talohan'ny, Ny SVG avy amin'ny tranomboky CC dia nafarana ho PNG ao InDesign, fa izao, hafarana ho SVG izy ireo. Vakio ny SVG, ary koa ny Animation Native (tsiky), dia tohanan'ny InDesign ary azo haondrana amin'ny HTML sy ePub. Ity safidy ity dia tsy misy ao amin'ny boaty fifanakalozan-kevitra Option Export (ePub sy HTML Export vakizoro) ary amin'ny dinika fanondranana HTML sy ePub.
Adobe InDesign 2020 v15 niasa mialoha
Author: FRANTSAY Interface Date Published: 10 Novambra 2020 Leave a Comment on Adobe Illustrator CC 2020